Magaalada Cape Town oo uu ka Dhacay Kulan ay Isugu Timid JAKSO – Rasaasa News
Magaalada Cape Town oo uu ka Dhacay Kulan ay Isugu Timid JAKSO
Jun 1, 2009 Ogaden News
Cape town – South Africa [ June 1, 2009], Waftigii ka socday golaha sare Jwxo ee kormeerka ku marayey Jaaliyada Koonfurta Afrika ee Somalida Ogadeeniya [JAKSO], oo kulan la qaatay Jaaliyada Somalida Ogadeeniya ee Magaalada Cape town.
Madaxdu, waxaa ay u kuur galaysaa sidda ay u socdaan hawlaha Jaaliyadaha ka jira magaalooyinka kala duwan ee ku yaal Koonfurta Afrika iyo waliba xaaladaha ay ku sugan yihiin xubnaha Jaaliyadu.
Waftigu waxaa ay warbixin ku siinayeen Jaaliyada, xaalada siyaasadeed ee geeska Afrika, dagaalada u dhaxeeya Ciidamada Itobiya iyo Jabhadaha dagaalka kula jira si ay u soo dhiciyaan xaqa ummada Somalida Ogadeeniya. Waxaa kale oo ay dhinacoodana ka dhagaysteen war bixino madaxda Jaaliyada Cape town, iyaga oo ka warbixiyey koradha dadka soo galaya dalkan, nolosha guud iyo dhibaatooyinka ka haysta dhinacyada sharciyada.
Kulamadii ugu dambeeyey ee ay Madaxdu la yeelatay Jaaliyada waxaa uu ka dhacay magaalada Cape town. kulanka ayaa waxaa isugu yimid dad aad u badan, oo aad u xiisaynayey in ay la kulmaan madaxda golaha sare.
JAKSO, ayaa ah jaaliyadaha sida xooga leh uga soo hor jeedsaday kooxda Jwxo-shiilada, una arkay in ay kooxdani tahay koox leh ujeedo aan wali la garanin.
Kooxad Jwxo-shiilada oo iyagu dhawr goor oo hore aflagaado ugu gaystay qaar ka mid ah xubnaha JKASO iyaga oo ugu yeedhaya in ay la shaqeeyaan safaarada Itobiya arintaasi oo ahayd mid ay iyagu ku jireen aakhiritaankiina la soo taabtay waxa ay ku jiraan iyo iyaga oo dacwado ku soo oogay muwaadiniin Somalida Ogadeeniya ah, taas oo ay guul daraysteen.
Hadaba, shirkan ka dhacay Cape town, ayaa waxaa ka soo qayb galay dad awal hore u shaqayn jiray kooxda Jwxo-shiilada oo waydiistay JKASO in la cafiyo. Xubnahan hore ula shaqayn jiray Jwxo-shiilada ayaa shirka dhexdiisa la waydiiyey in ay hadlaan oo ay sheegaan in ay la shaqaynayeen koox aan ujeedadeeda la garanaynin.
Xubnahan shirka ka hadlay ayaa sheegay in ay wadeen hawlo ayna waxba ka ogayn oo kaliya ay ku shaqayn jireen magaca ururka JWXO, laakiin buu yidhi “xubinku hadii aan ogaan lahaa dhibaatooyinka ay u gaysteen halganka marna lama shaqeeyeen”.
Tan iyo intii ay fahmeen shacabka Somalida Ogadeeniya kooxda Jwxo-shiilada [garasho xun], munaafaqnimada ay wadeen iyaga oo ku soo gabanaya Magaca halganka iyo meesha ay gaadhsiiyeen halgankii aan ku tiir iyo tacab beelay. Waxaa kale oo ay dhibaato aan hore loo arag ka rideen Somalida Ogadeeniya kolkii ay xabad kala hor yimaadeen Jabhadaha la dirira Cadowga Itobiya. Waxay si kas ah u soo garab galeen ciidanka Tigrayga iyaga oo laayeey N/hurayaal qaali ah.
Waxay mar kaliya shacabka Somalida Ogadeeniya tuseen dhabarka, waxaana lagala wareegay Jaaliyadaha, Afrikada bari ee magaceeda loo soo gaabiyo JABSo, Jaaliyada Koonfur afrika ee iyana loo soo gaabiyo JAKSO, Jaaliyada Jarmalka JJSO, Jaaliyada JDSO, Jaaliyada Canada JCSO, Jaaliyada UK JUKSO iyo Jaaliyada USA JUSASO.
Jaaliyadahaas oo dhan ayaa waxaa ay maanta xidhiidh toos ah la lee yiihiin Hogaanminta Golaha Sare ee Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [GS-JWXO], oo iyadu ah isu taagtay in ay tubta ku soo rido halganka ay qaloociyeen kooxda Jwxo-shiiladu.
Arintan oo aan ku imanin baryo ee ku timid dadaal dheeraad ah oo ay sameeyeen xubnaha golaha sare ee Jwxo iyo Jaaliyadaha oo wada jira ayaa meel cidla ah dhigay cagmo ku dhiiglayaalka kooxda Jwxo-shiilada, oo inta ay doonto ha qaadateen laga gudi doono dambiga ay galeen intooda gashay.
Hadaba warbixinada ay Maxdaxda golaha sare siinayaan shacabka ayaa ah mid aad u farxad galinaysa oo taabanaysa wadnayaashooda.
Wariye: Axmed Haadi Jaaliyada JAKSO
Sudhayo Waa Sudhayoo Halgan Saakimimayso So,o ummbay ka Rabtaa,
Shir Sanadeedkii Jaaliyadda Somalida Ogadeeniya ee North America oo la Qabanayo June 6, 2009